Atụmatụ Semalt Atụmatụ Maka Ịhazi na Ịkwụ Ụgwọ gị SEO
Ndị na-eme atụmatụ ma na-eme atụmatụ Search Engine Optimizationsnwere ike ịdaba n'ọnyà ahụ n'ihi ihe abụọ. Ihe mbụ nwere ike ime bụ enweghị atụmatụ, nke abụọ anaghị ekenye yammefu ego. Dị ka ha na-ekwu, ịghara ịhazi atụmatụ na-emezughị.
Na SEO, ọdịda na-egosi ọtụtụ ihe, nkegụnyere imefu ego, iwepụ ohere na ịla oge. Mgbe ọ na-abịa SEO, ịmepụta atụmatụ mmefu ego na atụmatụ bụ isi ihe dị mkpaaga nke ọma. Dịka onye ahịa, ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe ndị bụ isi nke Search Engine Optimizations tupu ịmalite ime atụmatụusoro.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa ihe ndị ga-enyere gị aka ịghọta SEO.
Mmetụta Nchọpụta Mmetụta Dị Mma abụghị ọnụ ala
Nkọwapụta na-egosi na onye ahịa ga-adị njikere iji kwụọ ụgwọ$ 5,000 kwa ọnwa, $ 3,000 bụ ego kachasị elu nke onye ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ iji nweta ọrụ SEO dị n'aka ụlọ ọrụ asọmpi.
Dị ka Forbes si kwuo, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-anọ nnukwuego dị na SEO. Dika ihe bu eziokwu, ịkwụ ụgwọ SEO siri ike karịa $ 2,000 iji nye oru SEO zuru oke ma di eluna kwa ọnwa ọ bụghị ihe dị oké egwu..Otú ọ dị, ụfọdụ akụkụ nke SEO chọrọ ka a rụọ ọrụ na $ 1000.
Onye ahịa, onye dị njikere ịmepụta ọrụ SEO dị irèna ụlọ ọrụ kwesịrị inwe $ 46,000 na nkezi maka otu afọ. Na ụdị ego a, ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ SEO na ọkachamaradị njikere inye nsonaazụ dị irè n'oge kachasị nta.
Mgbe ị na-ahọrọ otu ụlọ ọrụ SEO iji rụọ ọrụ na, n'ezie, ọtụtụ ihebata n'ime egwu. Ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọnụ ọgụgụ ya na ahụmahụ ya mejupụtara akụkụ dị iche iche nke akụkụ ndị na-emetụta ọnụahịa. Makadịka ọmụmaatụ, ọnụahịa nke SEO ọrụ na Semalt bụ ọkara nke ahịa ahịa nke ụwa n'ihi isi ihe abụọ kpatara ya - nnukwu mgbanwe nkeiwu na ike nke ndị ọrụ. Ya mere, nhọrọ kachasị mma bụ ịchọ ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enye ihe ngwakọta nke uru naahụmahụ.
Nyochaa SEO dịka atụmatụ nke ogologo oge
Ị chetụla mgbe kachasị oge achọrọ ka ị hapụỌrụ Nyocha Search Engine? Dịka ọ dị, ọ na-ewe site na 6 ruo 12 iji mee ka SEO wetara gị nkwụsịtụ, ebe oge nke 4 ruo 6ọnwa dị irè maka ntakịrị utịp. Maka ọnwa abụọ mbụ, enwere obere ohere iru ihe ọ bụla dị mkpa.
N'ime ọnwa abụọ mbụ, a ghaghị itinye oge ka ukwuu n'ime oge ahụna-arụ ọrụ nyocha SEO ma na-eme atụmatụ ọganihu n'ọdịnihu. Enwere mgbanwe dị ntakịrị na usoro SEO naọnwa mbụ, ma ruo mgbe ngwụcha nke ọnwa nke abụọ nke ọrụ, ụfọdụ nsonaazụ ga - apụta ìhè.
A na-enweta ezigbo ego na afọ nke abụọ, mgbe saịtịndị nwe ụlọ na-amalite ịchọta ụgwọ ọrụ dị ịtụnanya. Nzọụkwụ ise nke atụmatụ na mmefu ego ga-akwadebe gị maka ịrụ ọrụ na SEO ụlọ ọrụnke ị họọrọ:
a) Rụọ ọganihu
Atụmatụ ogologo oge bụ ihe dị mkpa maka ihe ịga nke ọmanke SEO. Mgbe ị na-arụ ọrụ iji mee atụmatụ na mmefu ego nke mkpọsa SEO gị, ọ ka mma ka ị lekwasị anya n'ịmepụtaokporo ụzọ karịa ịnọ na ọkwa. Na SEO, ilekwasị anya n'ịzụ ahịa, na-eduzi, na ịzụ ahịa dị irè karịa ịṅa ntị ọtụtụọkwa.
b) Mkpebi mkpebi
Site na njedebe nke mkpọsa SEO gị, ị ga-achọ ịghọta otúezigbo ihe ịga nke ọma yiri..N'ezie, ị na-enwe mmụba pasent nke ọ bụla n'ihe gbasara ire ere na ihe karịrị pasent 30 na akwụkwọ akụkọndebanye aha maka afọ abụọ na-esote ga-ekpebisi ike dịka ihe ịga nke ọma. Nọgidenụ na-arụ ọrụ iji mee ihe mgbaru ọsọ gị iji nweta nsonaazụ kacha mma na SEO.
c) Gbalịsie ike ka ị nweta ihe mgbaru ọsọ gị
Ọ bụrụ na onye ọrụ SEO jere ije ma kwere nkwa ịme ahịa gịỌnụ ọgụgụ pasent na-abawanye na ọnwa iri na-abịanụ, ego ole ka ị ga-adị njikere ịkwụ ụgwọ? Tinye ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na e nwere ihe àmàatụmanya dị otú ahụ ga-adị adị maka ihe ịga nke ọma gị.
d) Mkpebi ego
Uru ị ga-adị njikere ịkwụ ụgwọ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrịenyere gị aka ịmepụta atụmatụ mmefu ego. N'elu mgbasa ozi SEO gị, etinyela ihe karịa ihe ị dị njikere iji kwupụta ịchọta gịihe mgbaru ọsọ.
e) Buru ụzọ mee ihe kachasị mma
Tinye ụfọdụ n'ime ihe mgbaru ọsọ SEO gị n'ọkwá dị elu na ịrụ ọrụha kariri. Ịchọpụta akụkụ nke SEO bụ ihe kachasị mkpa maka ụdị azụmahịa gị chọrọ nyocha dị mgbagwoju anya banyere SEOndị ọkachamara, ndị nwere ahụmịhe dị mkpa iji mee ka ha tụnyere.
Mgbe ị kwusịrị ụlọ ọrụ SEO, rụọ ọrụ na-esonụnzọụkwụ iji guzobe mmekọrịta dị ogologo oge.
1. Nye SEO gị ihe niile dị mkpa
Gị SEO siri ike nwere ohere zuru ezu na ebe nrụọrụ weebụ gị iji nyeNsonaazụ ngwa ngwa. Enweghị ike ịnye ha nchịkọta weebụ gị ga-eduba oge na-arụ ọrụ gbasara ọrụ.
2. Nye SEO gị ohere
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ SEO gị, ka ha jikwaa ebe nrụọrụ weebụ gị iji nweta ọrụ gị.
3. Nwee ohere maka akụkọ SEO ma gụọ ha
Ụlọ ọrụ SEO zuru ezu na-enye akụkọ gbasara ọnọdụ haọrụ. Dịka onye ahịa, jide n'aka na ị gụọ akụkọ ahụ nke ọma iji zere ọgba aghara.
SEO bụ atụmatụ dị ogologo oge nke na-eme ka ọganihu dị ogologo oge gaaa na-etinye atụmatụ na mmefu ego site na iji usoro ziri ezi. Na SEO, emela ihe ọ bụla ị na-eme dịka ha nwere ike imeọ na-ezighi ezi. Nzọụkwụ na ntuziaka ndị a kpọtụrụ aha n'elu ga-enyere gị aka inwe mgbasa ozi SEO dị mma ma nweta ezigbo ego Source .